Ihe mara tupu tupu ruo eru maka a nnyefe | Mortgage Loan na Mortgage Refinance
Tupu ị malite achọ a n'ụlọ, gị mkpa-eji ruo eru maka a nnyefe ego.
Usoro a na-agụnye a ngwa ngwa analysis site a nnyefe mara ịhụ ma ọ bụrụ na ị nwere niile dị mkpa ego ruru eru ịzụta a n'ụlọ.
Ị ga-enwe ike-eji ruo eru maka a ego ịzụta n'ụlọ gị gị na, ma ọ bụrụ na gị na ngwa na-adịghị anabata. Otú ọ dị, e nwere ihe ndị dị mkpa ị pụrụ ime iji atụgharị ọnọdụ gị gburugburu.
Na N'ezie, nke ahụ bụ, ijikwa a bụ isi ebe ogologo oge tupu ị izute na a nnyefe mara bụ smart ụzọ na-aga.
Ebe a bụ ụfọdụ aro iji enyere gi aka imeri isi mbipụta na nnyefe ego-ihu ọma usoro:
Nga ruo eru maka a nnyefe NO.1 mma gị na Ebe E Si Nweta akara
Mgbe dị iche iche lenders nwere dị iche iche Ebe E Si Nweta akara chọrọ, i nwere ike iji na-enwe ezi Ebe E Si Nweta akara; dị ka 680 ma ọ bụ karịa, -eji ruo eru maka a ego. Ọ bụrụ na gị scores na-adịghị elu nke ọma, e nwere ole na ole nzọụkwụ na ị pụrụ ime iji mma gị ranking:
Ịtụ akwụmụgwọ gị akụkọ: Ịtụ a oyiri nke akwụmụgwọ gị akụkọ ihe mere eme si Experian, TransUnion na Equifax. Mbo site na gị akụkọ na-arụ ụka ọ bụla njehie ị na-ahụ. Njehie na-ewepụ ma ọ bụ gbazie on gị akụkọ n'ime 30 ụbọchị.
Lezienụ ala ụgwọ: Ụgwọ akaụntụ maka 30% gị FICO Ebe E Si Nweta akara. Ịṅa ala ụgwọ ga-gị akara.
Lezienụ gị ego na oge: O nwere ike buru ọtụtụ ọnwa, ma ịṅa gị ego na oge ga-mma gị na Ebe E Si Nweta scores.
Tụlee a ngwangwa re-akara: Ọ bụrụ na gị akara bụ nso 680, i nwere ike na-arụ ọrụ na gị ego mara ime a ngwangwa re-akara, ebe ị nwere ike ngwa ngwa ka ọ di ike.
Nga ruo eru maka a nnyefe no.2 Mụrụ ke kiet ke otu ọrụ
Lenders chọrọ ịhụ na ị na-arụ ọrụ iji nwayọọ nwayọọ na ke otu akara nke na-arụ ọrụ abụọ ma ọ bụ karịa afọ n'otu ebe tupu ị pụrụ tupu-eru maka a ego. A na-egosi kwụsie ike na emesi ha obi ike na ị ga-anọgide na-akwụghachi gị nnyefe.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ogologo oge, ịhụ na-anọ na gị ugbu a na-arụrụ ọrụ (ma ọ bụ na gị ọrụ ubi) ruo mgbe ị na-eru afọ abụọ akara. Na-agbanwe agbanwe ọrụ ụzọ ga-emerụ gị Ohere-eji ruo eru maka a ego.
Nga ruo eru maka a nnyefe no.3 jirichaa ego
Ọ bụrụ na ị na-agaghị na-eme ihe dị ukwuu ego dị ka ị chọrọ-eji ruo eru maka a ego, ị nwere ole na ole nhọrọ:
Get a na-akwụ na-ewelite.
Chọta a ngalaba-agbaziri agbaziri na ezi Ebe E Si Nweta. Ha na-akpata atụkwasịkwara gị nwere ike ime ka na mbinye ego o kwere omume.
Anya n'ihi na a ala-ọnụ n'ụlọ na i nwere ike mma imeli.
Nga ruo eru maka a nnyefe no.4 Mee ego akụ
Lenders amasị ịhụ na i nwere contingency ego na gị akụ - banyere abụọ ka ọnwa atọ nke nnyefe ịkwụ ụgwọ. Ọtụtụ lenders nwekwara achọ na-egosi na gị contingency ego anọwo na akaụntụ gị maka dịkarịa ala 60 ụbọchị tupu ị nwere ike tupu-eru maka a ego.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị ezu na akaụntụ gị, ị nwere ike ma gbaziri ndị dị mkpa ego si òtù ezinụlọ ma ọ bụ ịmalite azọpụta gị onwe gị ego. Otú ọ dị, na-uche ị ga mkpa ọnwa abụọ 'uru nke akụ okwu na-egosi na ị na nwere gị contingency ego maka chọrọ oge.
Anọ ndị a Atụmatụ nwere ike inyere gị aka na-eru ihe mgbaru ọsọ gị mgbe ọ na-abịa ichebe ndị nnyefe mkpa ịzụta a n'ụlọ, na ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị tupu-eru na mbụ, -eso ndị a nwere ike unu ebe a na ebe ị pụrụ tupu-eru maka a ego.
na-ege ntị ndị a video ike ịghọta ihe
anya! Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti Mortgage Nga iru eru Ma Mortgage Nga ihu ọma
Ebe E Si Nweta : realtor.com
Tagged on: ide maka a nnyefe nnyefe nnyefe ihu ọma
← Ịzụ a n'ụlọ na ego ma ọ bụ na a nnyefe | nnyefe, mortgages
Ihe Ị Mkpa Ịmata Ihe Mortgage Rates | nnyefe, mortgages, nnyefe ego, nnyefe mgbazinye ego, nnyefe Refinance, Refinance nnyefe →